Guddi xaqiiqo raadis ah ee naceeybka madowga reer Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Buundada dul-marta waddada Hyllievångsvägen ee Malmö, halkaasi oo lagu jir-diley nin madow, dabadeed la isku dayey in buundada laga tuuro. Halkaasina uu kula sugnaa wiilkiisa oo 1,5 jir ah. Sawirle: Madeleine Fritsch-Lärka/Sveriges Radio
Guddi xaqiiqo raadis ah ee naceeybka madowga reer Sweden
War-bixin ayaa laga soo saari
La daabacay fredag 5 december 2014 kl 16.00
Waxaa toddobaadkan booqasho ku soo gaarey dalkan Iswiidhen guddi khubaro ah oo ka socda ururka caalamiga ee Qarammada Midoobey, midkaasina oo howshiisu tahay sidii ey u indha-indheeyn lahaayeen sida uu dalkani u dhoowro xuquuqda madowga iswiidhishka.
Goobaha uu guddigan khubarada ahi booqan doono ayay ka mid tahay magaalada Malmö, halkaasina oo dhowaanahan ka dhaceen dhacdooyin lagu wax-yeeleeyneyo dadyoowga madowga ah, isla-markaana ey ka socdeen hoowlo looga hor-tageyo naceeybka madowga. Halkaasina oo madaxa howlahahaasi ee hoggaanka siyaasdeed Hanna Thomé (V), ay aad u soo dhoweeysay howsha guddiga:
- Waa howl muhiimad ku fadhida, isla-markaana aad u xiisa badan in guddi noocaasi ah lagala xaajoodo howlahan oo kale . Iyo sidoo kale in la in guddigu u soo gaaray dalkan sidii ey u indha-indheeyn lahaayeen, isla-markaana wax uga ogaan lahaayeen xogta tusaalooyinka iyo sidii tallaabooyin horey loogu qaadi lahaa. Waana midda ugu muhiim-san kolka laga hadleyo siyaasadda howlahan la xiriira.
Dalka Iswiidhen ayey ku dhaqan yihiin tiro gaarsii-san 150 000 ruux oo asalkoodu ka soo jeedo afrika, waana koox ey la soo gudboonaadaan falalka jinsi neceeybka. Halka dhanka kale ey hoos u dhaceen falal-dembiyeedyada la xiriira jinsi neceeybka intii u dhexeeysay sannadihii 2008 illaa iyo 2012, hase yeeshee ey kor u kaceen falal-dembiyeedyada madow neceeybka isla-wakhtigaa 24%, sida ku cad tira-koob uu soo saaray guddiga ka hor-tagga dembiyada.
Hase yeeshee maahan middaasi sababta uu guddigan xaqiiq-raadiska ahi uu dalkan ugu yimid booqashada. Booqashadan ayaa ka dambeeysa casumaad ay dawladda Iswiidhen u fidisay, halka uu dalkani yahay mid xiise ku fadhiya maadaama uu yahay waddan gacan ka geeystay gumeeytihii, sida ay sheegt ay caalinka jamaykaanka Verene Shepherd, kana mid ah xubnaha guddiga:
- Dalka Iswiidhen wuxuu sidoo kale gacan kku lahaa ganacsigii adoonsiga ee waddada transatlaantika iyo sidoo kale gumeeysashadii dhulka loo yaqaanno Saint Barthélemy iyo dalka Gaana. Sidoo kale waxaan eegeynaa dhaxalkii uu dalka ku reebay falkii gumeeysashada, iyo sidoo kale aqoonta ay bulsha-waynta Iswiidhen u leedahay taariikhdooda gumeeysi iyo in dalkan lagaga tallaabsado sidii loo hagaajin lahaa khaladaadk ii waagaasi la geeystey.
Qarnigii 16-aad ayuu dalkan muddo sanooyin ah qayb ka ahaa ganacsigii adoonsiga ee dalka Gaana, halka sidoo kale intii u dhaxeeysay sannadihii 1784 iyo 1847 uu qayb ka ahaa ka ganacsigii adoonsiga Saint-Barthélemy ee carriga Kariibiya.
Muddada shanta maalmood ah oo guddigan xaqiiqo raadinta ee ka socda ururka caalamiga ee hayadda Qarammada Midoobey uu ku sugan yahay dalkan Iswiidhen ayuu la kulmi doonaa wasiirka dhaqanka iyo dimoqoraadiyadda Alice Bah Kuhnke, wakiillo ka socda maamullada degmooyinka, ururrada madaxa bannaan oo ey ka mid yihiin dadyoowga u dhumuc duubtay howlaha la dagaalanka faqooqa iyo cunsuriyadda. Verene Shepherd iyo mar kale:
- Muhiimadda ugu wayn waxay tahay inaannu sida ugu suurtagal-san wax uga ogaanno habka loola dhaqmo madowga dalkan ku dhaqan kolka laga hadleyo suuqa shaqada, qowmiyad ahaan iyo la kulankooda hayadaha cadaaladda.
Sidoo kale waxaan laga tallaabsaneyn in la diiwaan geliyo falalka wanaagga, sida ay sheegtay iyada oo waayo-arag-nimadaa Iswiidhen laga helaa loo barbar-dhigi doono midda waddammada kale.
Bishii septeembar ee sannadkii tagay ayaa jir-dil loogu geeystey nin madow xaafadda Hyllie ee magaalada Malmö, iyadoo loo geeystay falal uu ka mid ahaa isku-day in buundo laga tuuro. Dhacdadaa ayaa indhaha lagu kala qaadey iyo dhibaatada la soo gudboonaata dadyoowga asal ahaan ka soo jeeda Afrika ee bulshada dhexdeeda, sida ay sheegtay Hanna Thomé oo ka mid ah hoggaanka magaalada Malmö qaybta cunsuriyadda.
Hase yeeshee ay Hanna Thomé aamin-san tahay in booqashada guddiga ka socda ururka caalamiga ee Qarammada Midoobey ee magaalada Malmö ugu wacan tahay howlaha carrigaasi ka socda ee la xiriira falalka faqooqa ee lagula kaco dadyowga madow. Iminkadan waxaa waxaa lagu howlan yahay ka baaran-degga qorshe looga hor-tegeyo naceeybka madowga.
Magaalada Malmö ayaa sidoo kale laga xusey dhowr jeer kaalintii uu dalka Iswiidhen ku lahaa ganacsigii adoonsiga. Tusaale ahaan waxaa jira fikir lagu qanac-san yahay, kaasina oo oranaya in 9-ka bisha oktoobar oo ku beegan maalintii la xoreeyey adoonkii ugu dambeeyay ee adoommadii Saint Barthelémy, in loo aqoonsado maalinta xasuusta adoonsigii, sida ay sheegtay Hanna Thomé.
- Waxaa jiray mooshin baarlamanka la hor-dhigey ee amuurtaa la xiriirey, hase yeeshee nasiib-darro la laaley, balse ay dhici karto in dib loo soo nooleeyo. Xaqiiqdii waxay amuurtaasi la xiriirtaa sidii loo xusi lahaa taariikhdii gumeeysiga ee gaarsiiyay dalka, halka uu iminka ku sugan yahay. Waana mid loo baahan yahay in kor loo soo qaado wacyiga aqooneed ee bulshada iyo ardeyda iskuullada ee reer Iswiidhen.